Kulindeleke aqoke iphini lesifazane uMengameli | News24
Kulindeleke aqoke iphini lesifazane uMengameli
Harare – Umengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe kulindeleke aqoke owesifazane kwesokuba yiphini lakhe ngemuva kwengqungquthela yeqembu ngenyanga ezayo, kanti umkakhe kuthiwa ngoMgqibelo uthe kuzobe kungekho lutho olubi uma umyeni wakhe eqoka yena.
UMugabe,93, selokhu abangumengameli kusukela izwe lithola inkululeko ngo-1980. Futhi sekukaningi ethi uyoqoka ozongena ezicathulweni zakhe uma esethatha isinqumo sokuthatha umhlala phansi.
OLUNYE UDABA: Bathweswe icala abafanise uMengameli nenja
UGrace Mugabe utshele iZanu-PF kwaBulawayo ukuthi iqembu lakhe lizokwenza izinguquko kumthethosisekelo ezizoqala ukusebenza ngemuva kwengqunbgquthela engoDisemba ngenhloso yokuba elilodwa kumaphini akhe amabili kuba ngumuntu wesifazane.
Ukuvumela uMugabe ukuba aqoke iphini lesifazane kungase kushabalalise amathemba ephini lakhe u-Emmerson Mnangagwa, obebonakala esethubeni lokuthatha izintambo kuMugabe.